Warbixin:;Madaxweyne Farmaajo iyo gudiga wadahadalka “Somaliland”. – KHAATUMO NEWS
Warbixin:;Madaxweyne Farmaajo iyo gudiga wadahadalka “Somaliland”.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu la kulmay xubnaha loo xulay wadahadalka “Somaliland” oo uu magacaabay madaxweynuhu lix bilood ka hor, lixdaas bilood hadduu la kulmay iyaga oo dhan.
Arrinta kale ee muujinaysa madaxweyne Farmaajo in aanu marnaba daacad ka ahayn in uu culays saaro sidii ay wadaxaajoodku u sii socon lahaayeen si loo helo qaran mideysan wuxuu gudigan magacaabay markay u hadhsanayd sanad iyo badh, wuxuuna la kulmay markay u hadhay wax sanad ka yar.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu talada ka qaataa marka arrimahan laga hadlayo xubno indhow garad ah oo caadifadda iyo siyaasaddu iskaga qasan yihiin, madaxweyne Farmaajana maaha waayo arag arrimaha “Somaliland” iyo Waqooyiga Soomaaliya ku xeel dheer. Wuxuuna ka xiiseeyaa in uu sawir la galo wiil Hargeysa calanka Soomaaliya ku qaatay oo ah goobtii ugu horaysay ee laba sudhay Soomaali dawlad ah.
Arrinta “Somaliland” way ka qoto dheer tahay gudi qaybtood laga diday in la magacaabo, waxaana jira dadka qaarkood oo aan loona dirin goobtii islaax laga rabo, iyo isu soo jiidka bulshada Soomaaliyeed si loo helo Qaran mideysan.
Wada-xaajoodka “Somaliland” waxay ka mid ahayd qorshayaashii madaxweyne Farmaajo ugu jiray barnaamijkiisii uu ka horjeediyey golaha baarlamaanka markii uu soo gudbinayey qorshayaashiisa mustaqbalka.
Run ahaantii midnimada Soomaaliya waa lagama maarmaan hasa yeeshee waxay u baahan tahay wada-xaajood Marathoniya oo aan kala go’ lahayn , qaab sir ah iyo qaab muuqdaba , oo la furo kinalo qarsoon oo lagu soo dhiraan dhirinayo arrimaha ugu muhiimsan, waxaana arrintaas ka bixi kara dad aqoon dheer u leh qaabka xilligan looga fekerayo “Somaliland” iyo gobolada waqooyi oo xaqiiqadu tahay in ay kuwada dhaqan yihiin bulsho dhiig iyo dhaqan wadaagta laakiin kala siyaasad ah.
Waxay u baahan tahay in ay xaaladdan abbaaraan dad xog-ogaal ah isla markaana muxanakiin ah, oo dhaqan iyo siyaasad isku darsaday xog-ogaalna u ah Waqooyiga Soomaaliya, oo xaqiiqada ka sheega halka sartu ka qudhuntay iyo qaabka loo daweyn karo, xukuumadda NN ee sii galbanaysaa way ku fashilantay faylkan, waana ciyi waaka bariyey
Previous Post: Deg Deg:Cumar Xasan Al-Bashiir oo Xabsi lagu xukumay
Next Post: Deg Deg Daawo:;Deni Oo Qaadacay Sharciga Doorashooyinka Soomaaliya,